किन साँघुरियो विश्वकप ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
किन साँघुरियो विश्वकप ?
जेष्ठ २५, २०७६ कुशल तिमल्सिना
१० टोली मात्र खेल्ने प्रतियोगितालाई पनि विश्वकप भन्न मिल्छ र ? क्रिकेटको एकदिवशीय विश्वकपको १२ औं संस्करण इंग्ल्यान्ड र वेल्समा जारी रहँदा क्रिकेटमा सामान्य ज्ञान राख्नेहरूको जिज्ञासा हो यो  । फुटबल विश्वकपलाई ३२ बाट बढाएर ४८ टिम पुर्‍याउने कसरत भइरहँदा क्रिकेट विश्वकपमा भने सहभागी टिम घटाइएको छ  ।
विश्वकपका यसअघिका दुई संस्करणमा १४ टिमको सहभागिता थियो । सन् २००७ को संस्करणमा त १६ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । यस्तो किन त भन्ने प्रश्न उठ्नुअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले जवाफ दिइसकेको छ, ‘विश्वकप विस्तार गर्ने नाममा टिम थप्दा प्रतिस्पर्धा कम भयो ।’आईसीसीले एसोसियट देशहरूमा लगानी बढाएर विश्वकपमा कडा प्रतिस्पर्धा दिलाउने गरी मूर्त योजना भने अहिलेसम्म बनाएको छैन ।
आईसीसीलाई लाग्ने गरेको आरोप हो– भारत, अस्ट्रेलिया वा इंग्ल्यान्डकै संरचनाअनुकूल आईसीसीले योजना कार्यान्वयन गर्छ । र, यी देशले क्रिकेटका नयाँ टोलीहरू माथि आए भने आफ्नो विरासत गुम्ने डर पालेका छन् । त्यसैले आफैंले बनाएको नियमबाट पछि हटेर आईसीसीले १० टोलीको मात्र सहभागिता निश्चित गर्‍यो । टेस्ट मान्यता पाएका आयरल्यान्ड र जिम्बाबेबाहेक अरूले यस विश्वकप खेलिरहेका छन् । १९७५ मा सुरु भएको विश्वकपको पहिलो संस्करणमा ८ टोलीको सहभागिता थियो । १२ संस्करणसम्म पुग्दा १० टोली भएका छन् । विश्वकप क्रिकेटका ११ संस्करणमा ५ देशले मात्र उपाधि चुमेका छन् ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्कालाई पनि विश्वकपको यो ‘फर्म्याट’ मन परेको छैन । प्रतिस्पर्धाको रोमाञ्च देखिएन भनेर नियम परिवर्तन गर्नु आईसीसीको केटाकेटीपन हो भन्नेमा उनले आंशिक सहमति जनाए । ‘धेरै टिमको सहभागिताले झन् धेरै प्रतिस्पर्धा बढ्ने कुरा ट्वान्टी–२० विश्वकपले नै पुष्टि गरिसकेको छ,’ पारसले भनेका छन्, ‘धेरै सहभागिता भनेको पक्कै पनि धेरै प्रतिस्पर्धा हो । एकदिवसीय मान्यता पाएको देशको खेलाडी हुनुका नाताले पक्कै पनि विश्वकप सीमित बनेको जस्तो लागेको छ । किनभने हाम्रा लागि विश्वकप यात्रा अझै कठिन बनाइएको छ ।’
‘आईसीसी आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर यो र यसपछिको संस्करणमा पनि १० टिमको मात्र सहभागिता गराउने निर्णय गरिसकेको छ । विश्व क्रिकेटको नियमक निकायको तर्क र उसको कदमसँग असहमत हुन सकिएला तर मान्दिन भन्न मिलेन । त्यसैले आगामी विश्वकपमा धेरैभन्दा धेरै टोलीले यसमा सहभागिता जनाउन पाउने अवस्था आयो भने यसले समग्रमा क्रिकेटको हित नै गर्छ,’ पारस भन्छन् ।
सन् २०१४ मा ट्वान्टी–२० विश्वकप खेलेको नेपाली टोलीले त्यसै वर्ष एकदिवसीय विश्वकपको छनोट खेलेको थियो । सफल भएन । आईसीसीले नेपालका लागि यस संस्करणमा पनि अवसर दिएको हो तर निकै कठिन बाटोबाट । गत वर्ष जिम्बाबेमा भएको प्रतियोगितामा नेपाल विश्वकपमा छनोट हुन असफल भए पनि एकदिवसीय मान्यता पाएर फर्केको थियो ।
पूर्वकप्तान तथा प्रशिक्षक विनोद दासको धारणा पनि पारससँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन थोरै टिम खेलाइएको हो भने प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसक्नु आइसिसीकै लागि लाजमर्दो भएको दासले तर्क गरे । ‘क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा हुने भनेको विकेट कन्डिसनअनुसार हो । एसियाली टोलीले इंग्ल्यान्ड, अस्ट्रेलियामा खेल्न कठिन हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक नै बनाउने हो भने त शीर्ष चार टिमको विश्वकप खेलाए भइहाल्यो नि ?’ दासको प्रतिप्रश्न छ ।
आईसीसीले ट्वान्टी–२० विश्वकपलाई विस्तृत बनाएर एकदिवसीय विश्वकपलाई सीमित बनाउन खोजेको देखिन्छ । ट्वान्टी–२० विश्वकपमा सहभागी देशको संख्या बढाउने योजना कार्यान्वयन भइरहँदा एकदिवसीयमा सहभागि टिमको संख्या घटिरहेको छ ।
‘टेस्ट मान्यतालाई आधार बनाउने अनि ट्वान्टी–२० लाई विस्तृत बनाएर आईसीसीले सिधै हाम्रोजस्तो क्रिकेटको विकासका चरणमा रहेको देशहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । एकदिवसीय खेल नखेली कसरी टेस्ट मान्यता पाउने, टेस्ट मान्यता नपाई एकदिवशीय क्रिकेट खेल्न नपाउने,’ पूर्वकप्तान दासले थपे, ‘आईसीसीमा एसोसियट राष्ट्रबाट बलियो प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि समस्या भएको छ । यस विश्वकपमै पनि बल्ल बल्ल छनोट भएको वेस्ट इन्डिजले नै बुझ्यो होला, कति कठिन छ भनेर ।’
सन् २०१९ र २०२३ का लागि विश्वकपमा खेल्ने १० टिमको सहभागिता अवसरको फर्म्याट उस्तै खालको छ । विश्वकपअघिको निश्चित समयमा आईसीसी बरियातामा शीर्ष ८ टोलीले सिधै विश्वकप खेल्नेछन् । टेस्ट मान्यता प्राप्त बाँकी ४ टोलीले पनि छनोट चरण खेल्नुपर्छ । यसबाट २ टोली छनोट गरी १० टिमबीच राउन्ड रोविन प्रणालीमा विश्वकप आयोजना हुन्छ । अहिले त्यही प्रणालीमा भइरहेको छ ।
नेपालजस्ता टोलीका लागि विश्वकपमा सहभागिता जनाउने एक मात्र बाटो भनेको त्यही छनोट प्रतियोगिता हो । जुन किनै कठिन छ । अर्को संस्करणको विश्वकप छनोटका लागि त लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ । यही बाटोले चार वर्षका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको नेपाली क्रिकेटको भविष्य पनि कोर्नेछ ।
आईसीसीले हालै ४ देशलाई एकदिवसीय मान्यता दिएपछि एकदिवसीय मान्यता पाउने टोली २० पुगेका छन् । नामिबिया, ओमान, पपुवा न्युगिनी र अमेरिका एकदिवसीय मान्यता पाउने नयाँ टोलीहरू हुन् । नेपालले यी नयाँ चार टोलीसहित स्कटल्यान्ड र यूएईसमेत ७ टोलीको सहभागिता रहेको विश्वकप लिग खेल्नेछ । झन्डै ३ वर्षसम्म चल्ने यस प्रतियोगिताको शीर्ष चार टोलीले सन् २०२२ मा एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउनेछन् ।
विश्वकप छनोटमा १० टोलीको सहभागिता रहने भनिए पनि विस्तृत विवरण आइसकेको छैन । तर, विश्वकपलाई सपना मानेका हाम्रोजस्ता देशका खेलाडीहरूका लागि भने विश्वकप खेल्नु असम्भवजस्तो बनेको छ । सन्दीप लामिछानेले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेजस्तै आईसीसीले उनीजस्ता खेलाडीको विश्वकप खेल्ने अपनालाई अझै कठिन बनाइदिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ११:१५